UMalema ugxeke i-ANC ngokugida ndawonye nokuswela abalandeli – LIVE Express
u-Commander In Chief (CIC) we-Economic Freedom Fighters (EFF), u-Julius Malema, ushiye angalazi kwiqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC) ngokugidagida ndawonye ngemikhankaso yalo yokhetho kanye nokuswela abalandeli abazogcwalisa inkundla yezemidlalo.
Ugxeke i-ANC ngokuthi ibambe umbuthano woyo wokugcina wokugaya ivoti, i-Siyanqoba Rally, esifundazweni i-Gauteng, e-Johannesburg, ekubeni leli qembu belisanda kubamba enye i-rally ngo-June 2016, e-FNB Stadium, e-Johannesburg, khona e-Gauteng.
i-Siyanqoba Rally ye-ANC ibibanjelwe e-Ellis Park Stadium, e-Johannesburg, ngeSonto kanti abalandeli be-ANC bebefike ngobuningi ukuzokweseka i-ANC.
“i-ANC namhlanje ikhuluma nabantu abafanayo neyakhuluma nabo e-FNB (Stadium) enyangeni noma ezinyangeni ezimbili ezedlule. Bakhuluma nabantu abafanayo. i-EFF namhlanje ikhuluma nabantu abasha ngokuphelele obekungakaze kukhulunywe nabo.
“uZuma, uye kokhuluma nabantu base-Gauteng kabili esikhathini esingaphansi kwezinyanga ezimbili. Umehluko yizinsuku nezinkundla. Kodwa kusengabantu abafanayo,” kusho uMalema enanelwa yizinkulungwane zabalandeli abebegcwalise phama i-Peter Mokaba Stadium.
uMalema uthi i-EFF iyiqembu likazwelonke ngakho ayidingi ukulokhu igidagida ndawonye ikhuluma into eyodwa nabantu ababodwa.
Ngaphezu kwalokho uMalema uphinde wagxeka i-ANC ngokuthi ize ilande abantu abasuka kwezinye izifundazwe ukuze ikwazi ukugcwalisa inkundla wathi i-EFF Igcwalise inkundla ngabantu baseLimpompo kuphela.
“Ayikho ibhasi la evela ngaphandle kwe-Limpompo. Kodwa ngizwile ukuthi abantu abafike okokuqala e-Ellis Park, bekungamabhasi avela e-Limpompo. Ngakho lezo yizihlwele ezibolekiwe.
“Sikhuluma nabantu abaqhamuka kulesi sifundazwe (Limpompo). Labantu abala, abagcwalise le nkundla, abavoti ababhalisile, abaqhamuka kumawadi neziteshi zokuvota,” kuqhosha uMalema engeza ngokuthi abathathanga abantu abadla i-nyaope nabadakiwe babagcwalisa enkundleni.
“ Bayazi ukuthi kungani bela. Abazele ukuzobona umculi, abazele ukuzobona usaziwayo, abazele izijumbane zokudla, abazanga la ngoba benesizungu. Balana ukuzokhombisa i-ANC nawo wonke umuntu ukuthi isikhathi sabo sesiphelile. Manje sekuyisikhathi se-EFF sokuphatha uhulumeni wase-Limpompo,” kuqhuba uMalema.
Baphume bahamba abe-EFF sekukhuluma uZuma